TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO TAO AMIN’NY LAPAM-PANJAKANA AMBOHITSIROHITRA ALAROBIA 18 NOVAMBRA 2020
-ALAROBIA 18 NOVAMBRA 2020-
Rahampitso alakamisy 19 Novambra 2020, hisy ny fivoriana manokana tarihin’Atoa. Filoham-pirenena iarahana amin’ireo mpiara-miombon’antoka toy ny Banky iraisam-pirenena, ny Vondrona Eoropeana, ny PAM, ny USAID, ary ny UNICEF, hamaritana ny asa goavana atao iarahana, ary koa hametrahana ireo tetibola manokana ho entina hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny ady amin’ny haintany any Atsimo. Nampahafantarina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra androany izany ho fanamafisana ireo asa efa natomboka toy ny :
fametrahana ireo toeram-pitsaboana sy fanarenana ara-tsakafo sady toeram-pamatsiana ara-tsakafo ny mponina any Atsimon’ny Nosy toy ny ao Ifotaka izay efa miasa ankehitriny ;
fizarana sakafo mahatratra 6000 taonina ho an’ny mponina any iarahana amin’ny PAM ;
fametrahana ireo komity miady amin’ny haintany « Comités anti-kere » izay tarihin’ny Governora any amin’ny faritra sy ny lehiben’ny distrika voakasik’izany ary ireo solon-tena isan-tokony avy amin’ny ministera maro sy ireo mpiara-miombon’antoka isan-tsokajiny miankina na tsia amin’ny fanjakana ;
fizarana rano sy sakafo (350t) iarahana amin’ny MAHAKAMA ;
ny fandrindrana ny fanisana ny mponina tena iharan’ny kere sy ny tsy fanjarian-tsakafo ;
ny fametrahana ny toeram-ponenana manakaiky fari-drano ho an’ireo fianakaviana marefo izay homena toerana 1000m² isam-pianakaviana mba ahafahan’izy ireo mivelona sy mamboly ary miompy. Fambolena amin’ny alalan’ny fanondrahana (goutte à goutte) ireo farim-pambolena, ny fiompiana osy sy ny fanodinana ny vokatr’izany ao anaty fohy ezaka izay ho fidiram-bola maharitra ho azy ireo ary fametrahana toeram-ponenana mendrika no atao. Efa nanomboka ny asa amin’ny famaritana ireo toerana hanaovana izany tetikasa izany izay manakaiky ny reniranon’i Mandrare ary atomboka ao Ifotaka.
Noraisina ny fandaniana ny volavolan-dalàna mikasika ny famatsiam-bola ho amin’ny tetikasa PRODIGY (projet d’appui à la gouvernance digitale et aux réformes de l’État civil et des identifiants) mitentina 143 tapitrisa dolara iarahana amin’ny Banky Iraisaim-pirenena natao sonia ny 12 Oktobra 2020.
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola sy ny Minisitry ny indostria ny varotra ary ny asa-tanana ary ny Minisitry ny fambolena, fiompiana ary ny jono :
Noraisina ny fandaniana ny volavolan-dalana, mikasika ny fampindramam-bola iarahana amin’ny BAD/FAT, mitentina 28 tapitrisa dolara, ho amin’ny tetikasa PTASO na ny « Projet de Développement de la zone transformation agro-industrielle dans la région du Sud-ouest de Madagascar » natao sonia ny 15 oktobra 2020
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny kolontsaina sy ny serasera :
Nodinihana sy nolaniana nandritra ny Filankevitry ny Minisitra androany ny volavolan-dalàna mikasika ny politikam-pirenena momban’ny kolontsaina.
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fitsarana
Atoa BOTOLAHY Charles, dia voatendry ho Talem-paritra miadidy ny fonja ao Analanjirofo
Atoa INDRIAMIFIDY Nantenaina Gérald, dia voatendry ho Talem-paritra miadidy ny fonja ao Melaky.
Atoa JANARISONA, dia voatendry ho Talem-paritra miadidy ny Fonja ao Matsiatra Ambony.
Atoa RASOLONJATOVO Harilantoniaina Michel, dia voatendry ho Talem-paritra miadidy ny fonja ao Atsimo Andrefana.
Atoa DARSON Havelomamiakadaza Jean Michel, dia voatendry ho Talem-paritra miadidy ny fonja ao Menabe.
Ramatoa VOLAZARA Sakina Mohamady, dia voatendry ho Tale miadidy ny fandraharahana ny fonja eo anivon’ny ministera.
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Toe-karena sy ny fitantanam-bola
Ratoa RAKOTOMANGA Iharisoa Hanitriniaina, dia voatendry ho lehiben’ny vaomiera foibe misahana ny tsenam-panjakana (Chef de Commission Centrale des Marchés)
Atoa NOMENJANAHARY Dupont Herilala, dia voatendry ho lehiben’ny vondrom-paritra misahana ny tsenam-panjakana ao SAVA.
Atoa RANDRIA Herbert Gilles, dia voatendry ho lehiben’ny vondrom-paritra misahana ny tsenam-panjakana ao Menabe.
Atoa RANDRIAMBOLOLONIAINA Claude Aurélien Rafid, dia voatendry ho lehiben’ny vondrom-paritra misahana ny tsenam-panjakana ao Melaky.
Atoa BAZEZY Vanombe Clavelah Roslan, dia voatendry ho Prefet any Maevatanana.
Atoa RAKOTOMAHANDRY Timothée, dia voatendry ho Préfet any Ambatondrazaka.
Atoa HERMAN Reminantenaina, dia voatendry ho Préfet any Antsiranana.
Ratoa ANDRIAMANANA Ravaka Vincentelie, dia voatendry ho lehiben’ny distrikan’Ambilobe
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka
Atoa ANDRIANJAKA RAZAFINARIVO Isaie, dia voatendry ho Tale misahana ny « Agence de Contrôle de la Sécurité sanitaire et de Qualité des Denrées Alimentaires »
Ratoa RAKOTOARISON Ratsaraharimanana Catherine Nicole, dia voatendry ho Tale misahana ny « Centre d’Aide Médicale d’Urgence ».
Ratoa RAVAOARISOA Lantonirina, dia voatendry ho Tale misahana ny « Laboratoire d’Analyses Médicales Malagasy ».
Atoa RANDRIANARISOA José Clément, dia voatendry ho Tale misahana ny Soins de Santé de Base.
Colonel RABARISON Tina Luc Olivier, dia voatendry ho Tale mpiandraikitra ny « Centre de Surveillance des Pêches » (CSP).
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fambolena, Fiompiana, Jono sy ny Minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa
Atoa ANDRIAMAHERIARISOA Lazahasina Jocelyn, dia voatendry ho Tale misahana ny fitantanana ara-bola ao amin’ny Foibem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin’ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra (CENRADERU/FOFIFA).
Foana ny didim-panjakana laharana faha 2019-181 tamin’ny 20 febroary 2019 nanendrena ny Tale misahana ny « Audit et Contrôle Interne ».
Foana ny didim-panjakana laharana faha 2016-1071 tamin’ny 27 jolay 2016 nanendrena ny Tale misahana ny fitantanana ara-bola .
Natao androany faha 18 Novambra 2020